Ny tombotsoantsika - Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Additives amin'ny karbaona
Coke Pitch Coke
Herinaratra / HP elektrôna avo lenta
Herinaratra elektrika / RP mahazatra
Ultra High Power Graphite Electrode / UHP
Tsipika famokarana tanteraka
Ekipa efa za-draharaha
Fitantanana kalitao henjana
Serivisy tsara aorian'ny fivarotana
Antsoy izahay anio amin'ny 0086-18131011120 na mailaka amy@qfcarbon.com
Ny vidin'ny famokarana lafo nefa ny vidiny ambany noho ny fiaraha-miasa maharitra. Afaka manana safidy isan-karazany ianao ary azo antoka ihany koa ny sandan'ny karazany rehetra. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manontany anay.
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd. dia mpamokatra karbonika lehibe any Shina, manana traikefa famokarana mihoatra ny 15 taona, afaka manome fitaovana sy vokatra karbonina amin'ny faritra maro. Izahay dia mamokatra indrindra ny Carbon Additives (CPC & GPC) sy ny electrode grafita miaraka amin'ny naoty UHP / HP / RP.
Safidio ny sokajy Anode Carbon Block Anthacite calcined Coke / solika Coke Pitch Coke Additives amin'ny karbaona Cathode Carbon Block nasongadina Blocks grafita Electrite Electrode Sarin-tsary Coke Petroleum Coke / GPC Herinaratra / HP elektrôna avo lenta Products Herinaratra elektrika / RP mahazatra Ultra High Power Graphite Electrode / UHP
B # 1202, Furuite Times Square, Tanànan'i Handan, Faritanin'i Hebei, Sina